ဒီနေရာတွင်အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းအသိုင်းအအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစတင်ဇင်ဘာလ၌၂၀၁၇၊သာရှိခဲ့ ၁၅ ဂိမ်းနှင့်သင်တစ်ဦးဆန္ဒရှိ:ဖြစ်လာဖို့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအချက်အချာ XXX ဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်တော်ကြွားခြင်း၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုကျော် ၄၃ တစ်ဦးချင်းစီအားကစားပြိုင်ပွဲ၊အားလုံးအရာ၏လုံးဝသီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ဘယ်မှာကြည့်ရှုရန်၊အွန်လိုင်းတစ်ခုတည်းသောအရပ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်ကိုဤစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မေ့သွားဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုလုံးဂိမ်းဒေတာဘေ့စ၏အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ:ဘယ်သူမှကြောင့်ရှိပါတယ်ရရှိနိုင်ပါသည်!, အများကြီးရှိပါတယ်၊အရာစီစဉ်ထားသည့်အနာဂတ်များအတွက်၊ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာကျွန်မပြောချင်တဲ့အကြောင်းအပြင်:အောင်ဖွင့်ချစီးပွားအဘယ်အရာကိုမြင်အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအမှန်တကယ်ကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ သဘာဝကျကျ၊သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခုအချိန်မှာဆိုရင်သင်ရုံရချင်တွင်း၊ဒါပေမယ့်ဖတ်မှအခမဲ့ခံစားရအောက်တွင်ချချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ကျီမီခင်ဗျားတက်လက်မှတ်ထိုး။ ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အချိန်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနေ့:ကျနော်တို့သင်သည်ဤမွေ့လျော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အသိုင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရဖန်တီးပါ။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊၄၃ ဂိမ်းအတွင်းအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကဖန်တီးတာအိမ်-နှင့်ကိုယ်စားပြုစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်။ ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်နိုင်မှသူတို့ကိုတင်ပြရန်သင်ယုံကြည်သောသင်တို့သည်ပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူအကွာအဝေးဂိမ်းအကြှနျုပျတို့ရရှိနိုင်သောရှိသည်။ ဒါဟာအရေးအရမ်းအစမှငါတို့သည်ပူဇော်အမြင့်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်;တချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုမကြိုက်ဘူးတူညီသောအမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲကဖန်တီးတစ်ဦးကြီးမားသောခင်းကျင်းလွှတ်ပေးဆပ်ဖို့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအလိုဆန္ဒ။, သင်တွေ့လိမ့်မည်၊အို၊စာမျက်နှာများ၊ရွယ်ရောက်ပြီးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအလွန်အနည်းဆုံး၊အကြီးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအမှန်တကယ်ဂိမ်း။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ချင်တယ်ဆိုရင် RPGs၊ချိန်းတွေ့ simulators၊အရေးယူခံုးခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုလုံးဝရှိလိမ့်မည်တစ်ခုခုအတွင်းသင်ပျော်မွေ့ရန်။ အပြည့်အဝကောက်ခံမှာအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအသီးကိုကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း:ဒီတခြားဘယ်နေရာမှာအွန်လိုင်းဂိမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်။ ပျော်မွေ့ချင်လျှင်သင်အရာအားလုံးကိုရှိသည်၊တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသင်အဖြစ်သွားနိုင်ကြဘူးကြောင်းလျှင်သင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး!, ကျနော်တို့ကြီးသောသတင်းအကြောင်းအရှေ့သော်လည်း၊-ဖတ်ပြီးနောက်အပိုဒ်မှအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာ!
သင်ရှိပါကရုန်းကန်အတိတ်အတွက်အတူဂိမ်းအကြောင်းသင်ပေးဆောင်ရနိုင်ရန်အတွက်၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ကြပြီစိတ်ပျက်မှာအချို့သောအမှတ်။ အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကိုလုံးဝအခမဲ့အဘို့။ မှန်–သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်တစ်ပြားပေးဆောင်ရနိုင်ရန်အတွက်ဝင်ရောက်ရန်ငါတို့ပြီးပြည့်စုံသောစာကြည့်တိုက်အကြောင်းအရာ၏။ အရမ်းအစမှ၊ကအကြောင်းအရေးပေးသွားဖို့လက်လှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအမိန့်အတွက်ပြသရန်အဘယျသို့အကြှနျုပျတို့ရရှိနိုင်သောရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောအားဖြင့်ပယ်ရှားပေးခြင်း၊ကျနော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်လွန်ကြီးစွာသောထုတ်လုပ်ရေးပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောင်းပန်းချီပြီးနောက်အချက်ကို။, ဒီမှာအောင်မြင်အားဖြင့်ထောက်ခံအတွက်ဝယ်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းများကိုမည်သည့်ပစ္စည်းအားသာချက်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့၊သငျသညျနေဆဲအနိုင်ကစားရန်ဤဂိမ်းပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ သင်သည်လည်းကိုတိုက်ရိုက်လှူဒါန်းရန်စီမံကိန္းကိုသင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ဒါပေမယ့်မဟုတ်မှာအားလုံးလိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်မြှုပ်နှံဖို့ကွာပေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအစဉ်အမြဲနှင့်အစီအစဉ်လွဲမှဤချဉ်းကပ်မှု။ ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊တက်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါဒီမှာအခမဲ့များအတွက်၊သင်အမြဲသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအခမဲ့။, သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းရပ်တန့်အပေါ် subpar ဂိမ္း:ကျနော်တို့ကပေးလိမ့်မည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်၏အလိင်ဆက်ဆံပြုမူဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးသင်လိုအပ်!
ပူပြင်းတဲ့ XXX ဂိမ်းပျော်စရာ
သင်သည်အစဉ်အဆက်ချင်မှပယ်တွင်လူရှုပ်ဖို့ထိပ်တန်းအရည်အသွေးဂိမ်း? သင်ကတူခံစားတဲ့အထွေထွေဖြန့်ချိသင်တွေ့ကြပြီနှစ်ကျော်ဝေးအောက်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များ? ကောင်းစွာ၊မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။ အသင်းမှာအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအားလုံးသိလွန်းကောင်းစွာအလွန်ကြီးစွာသောညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအားလုံးအကြောင်းပါ၊ကျွန်မတို့ကဖန်တီးအကောင်းဆုံးအချို့ XXX ဂိမ်းများလိမ့်မည်အစဉ်အဆက်ရှာတွေ့။ ဒါပေမယ့်မယူကြဘူးကျွန်ုပ်တို့၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယုံကြည်မှု၏ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်သောလူသားတက်လက်မှတ်ရေးထိုးနှင့်မြင်ယုံနှင့်အထင်ကရစစ်ခင်းကျင်း၏ခေါင်းစဉ်ရှိသည်။ သတိရ:အပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ဒီနေရာမှာလုံးဝအခမဲ့သင်ပျော်မွေ့ရန်အဘို့အစဉ်အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။, သင်၏အချိန်ယူနှင့်အတူချွတ် jerking၊ဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်ပလွံ! သငျသညျစိတ်လှုပ်ရှားရလိမ့်မယ်အလွန်လျှင်မြန်စွာ၊ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊အကြောင်းလုံးဝပုံမှန်။ ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအများကြီး XXX ချာလျှင်ငါတို့သည်အောင်မသင်ကျောက်အစိုင်အခဲအတွက်အမှု၏စက္ကန့်။ ထို့အပြင်၊ယူမှတ်သားသောအချက်ကိုလည်းအပြည့်အဝအခမဲ့ဗီဒီယိုဒေတာဘေ့စ:သင်ပျော်မွေ့သို့သော်သင်ဆန္ဒရှိ။ အချို့လစ်များလာမှအကောင်းဆုံးစတူဒီယိုအပေါ်ဂြိုဟ်အပါအဝင်၊အဖြစ်မှန်၊Brazzers၊ဘန်ယာဉ်ရပ်နားပြီးတော့!
အဖြစ်အများကြီးငါရှိသမျှတစ်ခုတည်းအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုကျနော်တို့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအရာအချို့ရှိနေရန်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု။ စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေရာများစွာကိုရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ရှေ့ဆက်မသွားနှင့်အတူအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ:ကျနော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်ဒါခေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်များ။ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ပိုကောင်းလာရန်အပေါ်အတွင်းပိုင်းနှင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး:မသိရပါဘူးအဘယျသို့သင်ပျောက်ဆုံးနေအဘယ်တော့မှရှိပါကသင်သည်ကစားဒီနေရာမှာအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ။ ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အကြာ ၆၀ စက္ကန့်ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်း၊သင်ဂိမ်း ၂၄/၇။, လက်ျာဘက်အရာလုပ်ဖို့စတင်ခြင်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဒီကိုအလွန်လက်ငင်း–သင်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်အစာဖတ်ခြင်းအထိဤအချက်၊ဒါပေမယ့်အခုအချိန်သင်တို့အဘို့အတွင်းရှိရရန်စတင်သင့် XXX ဂိမ်းစွန့်စားမှု။ စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစား–အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် jerking! ျငိမ္းခ်မ္းေရး။